अग्रवालले गरे हाजिर: पूर्वमहान्यायाधिवक्ता भन्छन्- 'अग्रवाल डिन हुन मिल्दैन' - Purbeli News
प्रकाशित मिति: शनिबार, पौष २९, २०७४ समय: ८:१४:४६
काठमाण्डाै । पूर्वमहान्याधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्राडा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले पुनः डिनको जिम्मेवारी लिन नपाउने बताएका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतले डा. शशि शर्मालाई डिनमा पुनरर्बहाली गरेसँगै अग्रवाल हटेका हुन्,’ श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अब आइओएममा नयाँ डिन नियुक्ति हुने हो । अग्रवालले कुन अधारमा पद सम्हाल्न गए त्यो सोचनीय विषय हो । सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि बँुदामा शशि शर्मा पछि पुनः अग्रवाल डिन हुनु भनेको छैन ।’
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)का पूर्वडिन प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले कार्यालय पुगेर हाजिरी गरेका छन् । शुक्रबार चार दिनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्वहाली भएका डिन प्रा.डा. शशि शर्माको अवधि बिहीबार सकिएपछि शुक्रबार अग्रवाल आफैँ डिनको जिम्मेवारी सम्हाल्न गएका हुन् । ‘मलाई सर्वोच्चले नियमसंगत नियुक्ति भएको भनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले डा. शशिको कार्यअवधि सकिएकाले मैले जिम्मेवारी सम्हालेको हुँ । आजै एमबिबिएस भर्नामा ८ सयजनाको काउन्सिलिङ गरँे ।’आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।